Qaphelisisa amathalente akho. Lilele lapho ibhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Qaphelisisa amathalente akho. Lilele lapho ibhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngifisa sibheke le ngxenye yamathalente esinawo kodwa esingacabangi ukuthi angasenzela imali. Enye yezinto esizenzayo njengabantu abacathulisa abanye wukuvundulula ithalente noma amathalente umuntu anawo futhi angawasebenzisa ukuqala ibhizinisi, aziphilise ngawo.
Ngike ngahlala nomunye umngani wami sixoxa kabanzi ngomkhakha akuwona ebhizinisini. Enkulumweni yethu ngigcine sengimbonisa ukuthi kahle-hle lo mkhakha aloku ezama kuwona ibhizinisi akuwona umkhakha wakhe, yingakho kuba sengathi wumqansa yonke indawo lapho ehlwanyela khona.
Iningi labantu liye livule ibhizinisi bese libeka ithemba ekutholeni amathenda. Loku kuyingozi ngoba kusho ukuthi lowo muntu usuke engenawo umbono othile ngokuthi ibhizinisi lakhe limayelana nani.
Kuye kube wumuntu nje ovula ibhizinisi bese ethemba ukuthi ucilo ungahle uzishaye endukwini. Ngiye ngithi uma ngichaza le ndlela yokwenza ibhizinisi ngithi kufana nomuntu onikwa isibhamu ebusuku kukhanya ugesi akwazi ukubona okufanele akudubule, kuthi uma sekucishwe ugesi azame ngayo yonke indlela ukudubula kodwa lutho ngoba akasayiboni, ithemba lakhe lilele ekutheni nganhlanhla thizeni uzoyinemba leyo nto. Kunjalo-ke ukubeka ithemba lebhizinisi lakhe ekufuneni amathenda.
Qala ibhizinisi uqonda kabanzi ukuthi lizokwenzani ngoba uma ungakwenzi loko uzozithola uwumantuntanendishi ngoba kwawena awuzazi ufuna ukwenza bhizinisi lini.
Ake sibuye ekusebenziseni ithalente lakho ukuqala ibhizinisi. Ngokuqhubeka kweminyaka bengiloku ngibona ikhono elihle lokuqeqesha lomngani wami analo kodwa inkinga wukuthi yena ubengaziboni eqeqesha abantu. Loku ngikushiso wukuthi uwumuntu okwazi ukukhuluma nabantu bamlalele futhi unekhono lokuchaza izinto ngendlela elula abantu baqondisise. Okubuhlungu wukuthi akakaze azibone enza lolu hlobo lomsebenzi. Nokunye wukuthi unekhono elimangazayo ekwelulekeni abantu.
Isikhathi esiningi siye singazinaki izimpawu ezivela ngezindlela eziningi uma senza izinto noma siziphilela nje empilweni kanti empeleni ziyizinkomba zokuthi uma singagxila emathalenteni esinawo singazithola senza enhle imali lena. Yebo, kuhle ukuba nethalente kodwa okubaluleke kakhulu wukulikhulisa. Ngeke uvuke ngakusasa usuwungoti wanoma yini onethalente layo.
Kwesinye isikhathi kudinga umuntu ongaphandle ukuthi abone ithalente wena onalo kodwa ongaliboni. Ngakho-ke kuhle ukulalela uma kukhona umuntu okutshela nesipho noma ithalente wena onalo. Qaphelisisa bese ucabangisisa.
Ngibe sengimbonisa lo mngani wami ukuthi ake asebenzise leli thalente lakhe lokuqeqesha nokweluleka osomabhizinisi abancane ngezinto ezimayelana namabhizinisi. Emva kwenkulumo yethu akabange esapholisa maseko wathi uzokwenza i-profile yenkampani yakhe angithumelele yona ngiyicubungule.
Angingabazi ukuthi uzophumelela kulo mkhakha ngoba lena yinto ayenza kalula futhi uyifundele. Okwami wukumcathulisa ukuze ekugcineni leli thalente analo lichume.
Ayikho into emnandi njengokusebenzisa ithalente wenze imali. Loko kwenza ukuthi usebenze ngokunethezeka. Cabanga nje abadlali bebhola noma abaculi noma abakhangisi kwithelevishini ukuthi bakuthokozela kangakanani abakwenzayo. Benza into abayithandayo ebangenisela nemali.
Ngakho-ke kubalulekile ukuthi kwesinye isikhathi ungaphoqi ukwenza ibhizinisi kwawena ongalithandi kodwa ithalente lakho libe likhomba ukuthi ungenza okunye kukwenzele imali. Uma ukwazi ukusebenzisa izandla, zisebenzise. Uma kuwukukhuluma, sebenzisa amazwi wenze imali. Uma kuwukulalela, lalela abantu ubaluleke wenze imali. Uma kuwukuqhamuka namaqhinga aphusile, qhamuka namaqhinga azoba yisisombululo ezinkingeni abantu ababhekana nazo wenze imali.
Ngamafuphi ngithi kwesinye isikhathi amabhizinisi ethu awahambi kahle ngenxa yokuthi senza into engahambisana nento esiyizwa enhliziyweni. Sisemabhizinisini ngoba sibona abanye abanye bekuwona, hhayi ngoba siwathanda.
UBiyela ungumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting
I-TELKOM iqoke uMnu uSerame Taukobong njengesikhulu esiphezulu esisha. Uzoqala kancane kancane kulo msebenzi ngo-Okthoba kodwa uzothatha izintambo ngokugcwele ngoJulayi 2022. UTaukobong uthatha izintambo kuMnu uSipho Maseko osebe yisikhulu esiphezulu sale nkampani iminyaka eyisishiyagalombili. Njengamanje uTaukobong uyisikhulu esiphezulu seTelkom Consumer Business.
Uphendule inkinga yokukhula enenselelo yesikhumba isinkwa sakhe osenebhizinisi lezimonyo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE